China China Wholesale avo lenta vidin'ny fifaninanana Mena mena mpamokatra sy mpamatsy | AGR
China Wholesale avo lenta vidin'ny fifaninanana Apple vaovao
Ny lanja mahavelona ny paoma
1, ny paoma dia karazan-tsakafo kely kaloria, isaky ny 100 grama dia mamokatra hafanana 60 kcal. Zava-mahadomelina ao anaty soluble, mora entin'ny vatan'olombelona, ​​fantatra amin'ny anarana hoe "rano velona". Manampy amin'ny famoahana ny solifara sy ataovy malama sy malefaka ny hoditra.
2, ny paoma dia manana "voankazo fahendrena", "lau fahatsiarovana" anarana fiderana. Ny fihinana paoma bebe kokoa dia efa ela no nanatsara ny fahatsiarovan-tena sy ny faharanitan-tsaina. Manan-karena siramamy, vitamina, mineraly ary otrikaina hafa ilaina amin'ny ati-doha ny paiso.
3. Manankarena zinc ny paoma. Araka ny fikarohana, ny zinc dia singa iray anzima manan-danja maro amin'ny vatan'olombelona ary singa iray lehibe hampiroboroboana ny fitomboana sy ny fampandrosoana.
4. Ny fofon'ny paoma dia fanefitra amin'ny famoizam-po sy famoizam-po.Hitan'ny manam-pahaizana taorian'ny fitsapana maro fa, eo amin'ireo fofona maro, ny fofon'ny paoma dia misy fiatraikany ara-psikolojika lehibe indrindra amin'ny olona, ​​misy vokany miharihary amin'ny famongorana ny fahaketrahana ara-tsaina. Ny fampiharana dia nanaporofo fa ny toe-pahasalaman'ny marary manana fahaketrahana ara-tsaina dia nihatsara tokoa taorian'ny fofony ny fofon'ny paoma, nilamina sy faly ny fanahy, ary nesorina ilay toe-tsaina ketraka.
5. Ny asidra malika ao amin'ny paoma dia misy vokany fotsy: maro ny olona manahy ny amin'ny mety ho lo ny nify noho ny asidin'ny paoma. Ny paoma aroso amin'ny fromazy dia mametra ny asidra, ary ny fihinana paoma dia afaka manampy amin'ny fanadiovana tsara ny nifinao.
Ny vitamina C amin'ny paoma dia fiarovana ny aretim-po, mararin'ny aretim-po misy singa mahasalama.
Ireo olona nihinana paoma marobe dia tsy dia nahazo hatsiaka noho ireo izay tsy nihinana na vitsy ny paoma. Vokatr'izany dia nisy mpahay siansa sy dokotera niantso ny paoma hoe "voankazo mahasalama omni-directional" na "mpitsabo ankapobeny". Ankehitriny ny fahalotoan'ny rivotra dia matotra kokoa, ny fihinanana paoma bebe kokoa dia afaka manatsara ny taovam-pisefoana sy ny fiasan'ny havokavoka, miaro ny havokavoka amin'ny vovoka sy ny soot eny amin'ny rivotra.
Previous: Manondraha voankazo paoma vaoavao vaovao 2020 amin'ny vidiny lafo
Manaraka: Voa voajanahary fotsy voa voajanahary voajanahary voajanahary voajanahary voajanahary
Manondrana voankazo paoma vaoavao vaovao 2020 miaraka amin'ny goo ...